Tababare Laurent Blanc oo doonaya inuu hoggaamiyo koox ka dheesha horyaalka Premier League – Gool FM
Tababare Laurent Blanc oo doonaya inuu hoggaamiyo koox ka dheesha horyaalka Premier League
(England) 15 Okt 2019. Sida wararku ay sheegayaan Tababare Laurent Blanc ayaa doonaya inuu u soo dhaqaaqo horyaalka xiisaha leh ee English Premier League.
Wararka laga helayo gudaha Faransiiska ayaa sheegaya in macallinkii hore ee xulka qaranka France iyo Kooxda Paris Saint-Germain ee Laurent Blanc uu doonayo inuu la wareego oo uu hoggaanka u qabto koox ka dhisan gudaha dalka Ingiriiska.
Blanc, kaasoo xirfaddiisa ciyaarista kubadda cagta ku soo gabagabeeyey kooxda Manchester United ayaa la la xiriirinayey shaqada naadiga Lyon, laakiin kooxda ka dheesha horyaalka Ligue 1 ayaa magacaabatay macallin Rudi Garcia.
53-sano jirkaan Blanc ayaa ka maqnaa ciyaaraha tan iyo markii uu ka tagay kooxda PSG sanadkii 2016-kii, laakiin waxa uu diyaar u yahay inuu ku soo laabto maamulka kooxaha, dalka England ayaana ah halka uu jecel yahay inuu ka shaqo bilaabo.
Inkastoo uu jecel yahay inuu qabto koox ka dhisan dalka Ingiriiska ayaa haddana macallin Blanc aan la shaacin magaca kooxda uu ka hoggaamin doono horyaalka Premier League.